आज २०७६ मंसिर २ गते सोमबारको राशिफल - Lekbesi Khabar
आज २०७६ मंसिर २ गते सोमबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
२ मंसिर २०७६, सोमबार ०७:२१ November 18, 2019
कुबेतमा थुनामा रहेका २१ नेपाली कामदारलाई तत्काल फर्काउन संसदीय समितिकाे सरकारलाई निर्देशन